Jenezy 20 - Ny Baiboly
Jenezy toko 20
Ny nitoeran'i Abrahama tao Jerara - Abimeleka.
1Nifindra niala teo Abrahama, dia nankany amin'ny faritany atsimo, ka nonina teo anelanelan'i Kadesa sy Sora, ary nitoetra kelikely tao Jerara izy. 2Sarà vadiny nolazain'i Abrahama hoe: anabaviko io. Naniraka olona haka an'i Sarà Abimeleka mpanjakan'i Jerara. 3Tonga tamin'i Abimeleka tamin'ny nofy anefa Andriamanitra nony alina, ka nanao taminy hoe: Indro ho faty hianao, noho ny amin'ny vehivavy nalainao, fa vadin'olona izy.
4Mbola tsy nikasika an-dravehivavy anefa Abimeleka ka namaly hoe: Tompo ô, hovonoinao va ny olona na dia tsy manan-tsiny aza? 5Moa tsy nolazainy tamiko hoe: Anabaviko io? Ary ravehivavy koa nilaza tamiko hoe: Anadahiko izy. Ary fo mahitsy sy tànana madio no nanaovako izany. 6Dia hoy Andriamanitra taminy tamin'ny nofy: Izaho koa mahalala fa fo mahitsy no nanaovanao izany; izany no niarovako anao tsy hanota amiko. Ka tsy navelako hikasika azy hianao. 7Koa ankehitriny avereno ny vadin'io lehilahy io, fa mpaminany izy, ka hivavaka ho anao, dia ho velona hianao. Fa raha tsy averinao io fantaro fa ho faty mihitsy hianao dia hianao mbamin'izay rehetra ambany fahefanao.
17Ary nifona tamin'Andriamanitra Abrahama dia nositranin'Andriamanitra Abimeleka sy ny vadiny amam-panompovaviny, ka niteraka ireo. 18Fa efa nataon'ny Tompo momba ny kibon'ny ankohonan'i Abimeleka rehetra noho ny amin'i Sarà vadin'i Abrahama. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0885 seconds